Azia Atsimo-Atsinanana: Durian, ny “mpanjakan’ny voankazo” · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 06 Septambra 2010 8:16 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Español, বাংলা, srpski, 繁體中文, 简体中文, русский, Ελληνικά, English
Sarin'ny "durian" avy amin'ny pejy Flickr an'i YimHafiz ampiasaina eo ambany fiarovana CC License Attribution 2.0 Generic
Ny “durian” dia voankazo aty amin'ny tany mafana (“exotique”) hita any amin'ireo firenena Aziatika Atstimo-atsinanana. Fantatra amin'ny fofony sy ny tsirony mahery izy, izay itiavana na ankahalàn'ny olona maro azy. Maherin'ny 20 karazana ny “durian” any amin'ny faritra.
Na dia eo aza ny fofony mahery, ny “durian” dia sakafo feno be mpihinana noho ny tsirony miavaka. Ohatra ny amin'ireo vokatra azo avy amin'ny duran ireo mofomamy sy “macarons” any Kuala Lumpur, vatomamy sy glasy tsiro “durian” any an-tanànan'i Davao any Filipina, mofomamy misy “crème” durian sy “soufflé” any Brunei, ary durian nandrahoana anaty “feuilleté” vita amin'ny lafarinim-barimbazaha feno any Indonesia. Misy mihitsy aza ny fimailo manitra durian any Vietnam.
jerrenn avy any Malaizia dia tsy tia ny fofon'ny durian nefa miaiky fa tsy azo iadian-kevitra ny maha-mpanjakan'ny voakazo azy.
Mivandravandra izany ho an'ireo izay tia azy izany – [fa] ho an'ireo olona tsy tia azy, toa ny mpanome vaovao anao, sarotra ny hilaza azy ho mpanjakan'ny voakazo, na dia metimety ho ahy kokoa aza ny hiantsoana azy ho ‘voakazom-pirenena’
Nefa voakazo tsy manam-paharoa ny durian, sa tsy izany? Misy ireo olona tia azy, ary misy koa ireo mankahala azy. Izaho manokana aloha tsy mbola nitia azy. Diso mahery loatra ny fofony. Ho anareo izay mitia azy,aza miloa-bava, fa ho an'ireo tsy tia kosa, ho azonareo ny tiako holazaina rehefa miteny aho hoe mamofona maharikoriko io.
Ny mpanoratry ny GV Senor Pablo, tao amin'ny valin-teny amin'ny mailaka, dia manoratra momba ny lazan'ny durian any Brunei
Voakazo fanta-daza io aty Brunei…. ary manana karazana manokana tsy hita any amin'ireo faritra hafa amin'ny Azia Atsimo-Atsinanana izahay… toa ny durian miloko mavo manompy mena. Manana namana avy any Sina monina aty Brunei aho izay te-hizotra ho any Borneo hanandrana ireo karazany hafa….
Raisina ho mpanjakan'ny voakazo ny durian ary ho an'ny sasany izy odi-fitia!!
Momba ny durian mena indrindra, Foodiva's Kitchen dia mizara ny fomba fahandro ireo mofomamikely durian.
Mila ianarana ny manandra-tsiro ity durian ity ho an'ireo olona tsy nobeazina tamin'ny fihinanana ity voankazo mamy mahery fofona ity. Nefa etsy anie, izaho mihinana hanina mahery fofona toa ny fromazy frantsay, tsy misy olana, nefa tsy dia hoe nampianarina nihinana izany aho! Amiko ny vahaolana dia ny fananana toe-tsaina misokatra sy ny tsy finoana izay zavatra re na novakiana raha tsy efa nanandrana izany
Manontona kokoa ny durian mena any Borneo ary manana tsiro mamy dia mamy izay tsy afaka hosoritsoritako eto. Raha mba afaka nanoratra mantsy ny lelako, navelako nanoratra ho anao ny tena tsiron'izany izy. Tpt!
Voarara ny durian any amin'ireo toerana iombonana toa ireo hotely sy fiaramanidina. Still Life in Moving Vehicles avy any Bangkok dia mampiakatra sarin'ny peta-drindrina fandraràna durian
Voarara ny durian, ilay voakazo an-tany mafana sy manorana feno tsilo avy any Azia Atsimo-Atsinanana, any amin'ireo toerana iombonana. Hotely, fiaramanidina, ary na ny fiarakaretsaka aza indraindray dia manana marika na petaka eo amin'ny fitaratra izay manambara fa tsy maintsy ajanona ivelan'ny varavarana ilay voankazo noho ny fofony mahery sady ratsy. Misy tsaho an-dàlam-be manambara fa ireo olona mihinana durian miaraka amina zava-pisotro misy alikaola dia maty noho ny fihetsehana simika hafahafa. Ka tsara izany ny fisian'ny petaka iray hafa eo akaikin'ity voalohany, mandràra ireo mpandeha tsy hisotro ao anaty fiara
Multibrand dia mampitaha ny tanànan'i Jakarta any Indonezia amin'ny durian. Raha New York no Paoma Lehibe, ity mpitoraka blaogy kosa mamaritra an'i Jakarta ho Durian Lehibe
Nahatsapa aho fa mitovy amin'ny voakazo tiako indrindra i Jakarta. Ohatra, ny durian dia manana tsilo maranitrahoditra matevina, ary fofona azo ekena na dia misy aza ireo tsy mahazaka azy, nefa TSARA TSIRO MIHOATRA NOHO IREO VOANKAZO HAFA, ka tsy tiako atakalo voankazo hafa.
Tsy manelingelina an'i What's That Noise avy any Filipina ny fofon'ny durian
Tsy manelingelina ahy ny fofony. Be nofony ilay voankazo fa misy faikampaikany ary misy voany isaky ny fizaràna. Ny tsiro mampatsiahy ahy ireo tongolo somary mamy. Na ny olona tia azy na mankahala azy. Rehefa avy nihinana ampahany vitsivitsy izahay dia nomenay namana iray ny ambiny satria mamofona eran'ny trano ilay izy ka tsy hisy hihinana azy intsony ireo olona ato.
Kokot, avy any Filipina ihany koa, dia mino fa ny mihinana durian dia mitovy amin'ny “mihinana ny ‘glace’ tianao indrindra any amin'ny trano fivoahana iombonana”
Manana hazo mpamokatra durian ny fianakavian'ny raiko ka mihinana ilay voakazo daholo ny ankamaroan'ireo havany. Tadidiko fa fotoanan'ny fahavokaran'ny durian tamin'izay dia nanokatra harona feno durian ireo mpanadio trano tao an-tokotany atsimo, ary ireo rahalahy tsy iray tampo amiko kosa nanoloana azy ireo samy revo nijery ireo durian. Maha-te hihinana ny mijery ny tsirairay mihinana durian. Nomen'ny renibeko iray aho dia tsoriko fa tsy tia aho tamin'izany nefa nihazatra ka izao aho mankafy! Sahirana ihany aho tamin'ny nihinana azy voalohany noho ny fofony. Fombako ny niteny tamin'ny renibeko fa tahaka ny mihinana ny ‘glace’ tianao indrindra any amin'ny trano fivoahana iombonona. Nahazatra azy ny nampangatsiaka izany ka rehefa mivoaka ny vata fampangatsiahana izy dia tsara kokoa ny tsirony, tsara lavitra
Bucaio avy any Davao any Filipina (ny durian dia volena any amin'ny faritr'i Davao any Filipina) dia tsy tia tamin'izy nihinana durian voalohany
Tahaka ny mihinana dibera mamofona tongolo gasy izany. Tia dibera aho, ary mankafy tongolo gasy, ary tiako ny tsirony ampiarahina any amina sakafo na inona na inona izany. Nefa somary hafahafa ihany ny nahita izany fampiarahana izany anatina voakazo.
Nefa nanomboka tamin'izay dia nanova fomba fijery izy
Nanandrana karazany telo aho (Cob, Cob Mavo, Arancillo) ary samy mamy fatratra avokoa izy rehetra.
Mbola mamy noho ny langka (jackfruit), nefa miaraka amin'ilay fofona mahery ihany, na dia malefaka toa ny vohavoha mando aza ny nofon'ny durian, ireo faikany manify sy malamalama.
Angamba ny mahalaza tsara ny lazan'ny surian any amin'ny faritra dia ny tantara momba ny nandefasan'ny Stanley Ho, “mpanjakan'ny toeram-pilokàna” any Macau, ny fiaramanidina manokana tany Singapore mba hividy durian 98 isa fotsiny.
Nandray anjara tamin'ny fanoratana ity lahatsoratra ity ireo mpanoratry ny GV avy any Azia Atsimo-Atsinanana.